China Fanary taratasy fisakafoanana takelaka mpanamboatra sy mpamatsy | Chang Liang
MODELY Akora Habe vita Vidin'ny iray $ MOQ
11 inch 400-560g 28 sm 0.05-0.2 50000
Mampiasa akora vita amin'ny taratasy sakafo kalitao avo lenta izahay, eo anelanelan'ny 200g sy 500g, afaka manonta lamina sy loko tianao. Fomba famokarana vokatra: 1. Manaova takelaka fanontam-pirinty araka ny antontan-taratasy fanontana, tapaho ny habe ilaina, lamina fanontana ary ampitahao ny lokon'ny santionany fanontana mba hamitana ny fanontana. 2. Ataovy ny fitsaboana ambonin'ny araka izay ilainao. 3. Araka ny antontan-taratasy vita pirinty, ataovy maty ny antsy mifanandrify amin'ny fanapahana ampahany kely mba hamenoana vokatra kely. 4. Ampidiro ao anaty milina fanodinkodinana ny ampahany kely amin'ny vokatra mba hahatonga ny vokatra irina. 5. Araka ny filanao, fonosana mifanaraka amin'izany.
1. kalitaon'ny hazavana, manohitra ny fahasimbana. Raha oharina amin'ny tavoahangy fitaratra, ny takelaka taratasy dia maivana kokoa ary tsy dia vaky.
2. Low vidiny; Ny kalitaon'ny hazavana dia afaka mitahiry ny vidin'ny mivezivezy. Safidy ambony indrindra ho an'ny kojakoja fety. Fitaovana fiarovana ny tontolo iainana, mitahiry ny vidin'ny fanadiovana latabatra fitaratra.
3. Fisehoana tsara vokany; Ny haingo fanontana dia mora tratrarina, vokatra tsara ho an'ny besinimaro, afaka mampiroborobo ny varotra ..
Orinasa marina izahay. Mampiasa ny lanjan'ny fitaovana ilainao izahay. Tsy hanapaka an-jorony izahay. Ny kalitaon'ny vokatra: tsy mora ny deformation, tsy triatra, rano leakage solika ary olana hafa. Manana famokarana matihanina, famokarana, ekipa kalitao izahay. Noho ny matihanina, noho izany ny vidiny dia manana tombony lehibe. Avia, mila ny baiko izahay, ary mila serivisy sy kalitao izahay. Ary teo no niantombohan'ny tantarantsika, miara-miasa mba handresy..
teo aloha: Taratasy Krismasy lovia fisakafoanana
Manaraka: Takela-taratasy fanary ny antoko